RASMI: Martial oo dhammeystiray heshiiska amaahda ah ee uu ugu biiray naadiga Sevilla & Qodobbada ugu muhiimsan heshiiska oo daaha laga rogay – Gool FM
(Seville) 26 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Sevilla ayaa dhammeystirtay saxiixa Anthony Martial oo ay heshiis amaah ah kaga soo qaadatay naadiga Manchester United inta ka dhimman xilli ciyaareedkan.
Sevilla ayaa laga dhaafay qiimaha heshiiskan iyadoo aanan wax lacag ah ku bixin imaanshaha Martial ee garoonka Ramon Sanchez-Pizjuan, balse waxay bixineysaa qayb ka mid ah mushaharkiisa.
26-sano jirkan ayaa shalay oo Talaado ahayd yimid magaalada Seville ee ay ka dhisan tahay kooxda Sevilla isagoo halkaas ku maray tijaabada caafimaadka kaddibna saxiixay heshiiska uu kula joogayo naadiga reer Spain inta ka harsan fasalkan.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta Khamiista ah ayuu xiddigan la kulmi doonaa xiddigaha kooxdiisa kuwaasoo tababarka kusoo laabanaya kaddib dhowr maalmood oo ay fasax ahaayeen, waxaase maqan Munir El Haddadi, Bono iyo Youssef En-Nesyri oo ka qaybgalaya tartanka qarammada qaaradda Afrika, halka Lucas Ocampos, Papu Gomez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuna iyo Jesus Corona ay qayb ka yihiin xiddigaha xulalka Koonfurta Ameerika ku matalaya is-reebreebka Koobka Adduunka.
Rodrygo oo shaaciyay rajadadiisa sanadka 2022